थाहा खबर: हामी युद्धमा गयौँ भने प्रचण्ड-ओलीको औचित्य सकिन्छ
औपचारिक चिट्ठीको अर्थ सुरक्षाको ग्यारेन्टी
केही दिनयता सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले वार्ताको कोशिश गरिहेका छन्। वार्ता अघि बढाउन यसबीचमा विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग नेकपाका एक नेताले काठमाडौँ नजिकै भेटेको खुलेको छ। सरकारले औपचारिक पत्र पठाए मात्रै वार्तामा बस्ने अडानमा रहेको विप्लवसँग वार्ताको वातावरण जुटाउन सांसद सोमप्रसाद पाण्डे केही दिनयता दौडधुपमा छन्। के साँच्चिकै वार्ता हुन लागेकै हो त? यही सन्दर्भमा थाहाखबरका ज्ञानेन्द्र खड्काले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा ‘विरही’ सँग कुरा गरेका छन्।
वार्ता किन हुन नसकेको हो?
यदि सरकारले औपचारिकरुपमा पत्र काट्यो भने वार्ता गर्नुहुन्छ?
वार्ता भएन भने तत्कालीन कार्यनीति के हुन्छ?
सरकारले गरेका ज्यादतीको प्रतिरोध गरेर अघि बढ्छौँ। ढुक्क हुनुस् हामी एकतर्फी हतियार उठाउँदैनौँ। यसमा कुनै अलमलमा नपर्नुस्।